Ezekieri 16 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mwari anoda Jerusarema (1-63)
Anomuwana akaita semwana akaraswa (1-7)
Mwari anomushongedza oita sungano naye yekuti ave wake (8-14)
Mukadzi wacho anoratidza kusatendeka (15-34)
Anorangirwa upombwe hwake (35-43)
Anofananidzwa neSamariya neSodhomu (44-58)
Mwari anoyeuka sungano yake (59-63)
16 Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 2 “Mwanakomana wemunhu, zivisa Jerusarema mabasa aro anosemesa.+ 3 Uti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha kuJerusarema: “Unobva kunyika yeKenani uye ndiko kwawakaberekerwa. Baba vako vaiva muAmori,+ uye amai vako vaiva muHiti.+ 4 Pazuva rawakaberekwa, rukuvhute rwako haruna kuchekwa, hauna kugezeswa nemvura kuti uchene, hauna kukwizwa munyu, uye hauna kuputirwa nemachira. 5 Hapana akasiririswa newe kuti akuitire chimwe chezvinhu izvi. Hapana akakunzwira tsitsi. Asi wakaraswa musango nekuti waivengwa pazuva rawakaberekwa. 6 “‘“Pandakapfuura nepauri ndakakuona uchikava-kava uri muropa rako, uye pawainge wakarara muropa rako imomo ndakati kwauri: ‘Ramba uchirarama!’ Chokwadi pawainge wakarara muropa rako ndakati kwauri: ‘Ramba uchirarama!’ 7 Ndakaita kuti uve nevana vakawanda sezvinomera musango, uye wakakura, ukava munhu akasvika, ukapfeka zvishongo zvakanaka kwazvo. Mazamu ako akakura, uye bvudzi rako rakakura; asi wakanga usati wapfeka, uchakashama.”’ 8 “‘Pandakakuona ndichipfuura, ndakaona kuti wakanga wava pazera rekukwanisa kuratidzwa rudo. Saka ndakakufukidza nenguo yangu,+ ndikavhara muviri wako wakanga wakashama, ndikaita mhiko uye ndikaita sungano newe,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha, ‘uye wakava wangu. 9 Uyezve, ndakakugeza nemvura, ndikageza ropa rako, ndikakuzora mafuta.+ 10 Ndakabva ndakupfekedza nguo yakamendwa, ndikakupa shangu dzedehwe rakapfava,* ndikakumonera jira rakanaka, ndikakupfekedza nguo dzinodhura. 11 Ndakakupfekedza zvishongo, ndikakuisa zvishongo mumaoko uye chishongo chemuhuro. 12 Ndakaisawo mhete pamhino yako nemhete panzeve dzako nekorona yakanaka mumusoro mako. 13 Wakaramba uchizvishongedza negoridhe nesirivha, uye nguo dzako dzaiva dzejira rakanaka, nejira rinodhura, nenguo yakamendwa. Waidya furawa yakatsetseka, neuchi, nemafuta, uye wakapedzisira wava nerunako runonwisa mvura,+ uye wakanga wava kukodzera kuva mambokadzi.’” 14 “‘Mukurumbira wako wakatanga kuenda kune mamwe marudzi+ nekuda kwerunako rwako, nekuti wakanga usina kana chinoshoreka nekuda kwekubwinya kwangu kwandakaisa pauri,’+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.” 15 “‘Asi wakatanga kuvimba nerunako rwako,+ ukava pfambi nemhaka yemukurumbira wako.+ Wakaita chipfambi chisingaiti nemunhu wese aipfuura,+ uye vaiita zvavanoda newe. 16 Wakatora dzimwe nguo dzako ukashongedza nzvimbo dzakakwirira dzawaiitira upfambi.+ Zvinhu zvakadaro hazvifaniri kuitika; hazvifaniri kumbofa zvaitika. 17 Wakatorawo zvishongo zvako zvakanaka zvakagadzirwa negoridhe nesirivha yandakakupa uye wakazvigadzirira mifananidzo yevanhurume, ukaita upfambi nayo.+ 18 Wakatora nguo dzako dzakamendwa ukaifukidza, uye wakaipa mafuta angu nerusenzi yangu.+ 19 Uye chingwa chandakakupa kuti udye, chakabikwa nefurawa yakatsetseka, nemafuta, neuchi, wakachipawo mifananidzo yacho kuti inzwe kunhuhwirira kwakanaka.*+ Ndizvo chaizvo zvakaitika,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.” 20 “‘Wakatora vanakomana vako nevanasikana vako vawakanga wandiberekera,+ uye wakavabayira kuzvidhori kuti vaparadzwe.+ Upfambi hwauri kuita hahusati hwakwana here? 21 Wakauraya vanakomana vangu, uye wakavapa sezvibayiro uchiita kuti vapfuure nemumoto.+ 22 Pawaiita zvinhu zvako zvese zvinosemesa nemabasa ako eupfambi, hauna kuyeuka mazuva awaiva mudiki, pawakanga usina kupfeka, wakashama, uchikava-kava uri muropa rako. 23 Uchaona nhamo, uchaona nhamo nemhaka yezvakaipa zvese zvawakaita,’+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha. 24 ‘Wakazviunganidzira murwi wevhu, ukazvigadzirira nzvimbo dzakakwirira pamisika yese. 25 Wakavaka nzvimbo dzako dzakakwirira panzvimbo dzine mukurumbira chaizvo mumigwagwa yese, ukaita kuti runako rwako rupedzisire rwava kusemesa nekupa kwawakaita muviri wako kumunhu wese aipfuura,+ uye upfambi hwako hwakawedzera.+ 26 Wakaita upfambi nevanakomana veIjipiti,+ ivo vavakidzani vako vane ruchiva rusingaiti, uye wakandigumbura nechipfambi chako chisingaperi. 27 Iye zvino ndichakurova neruoko rwangu ndotapudza zvekudya zvaunowana,+ ndoita kuti vakadzi vanokuvenga vaite zvavanoda newe,+ ivo vanasikana vevaFiristiya, avo vakashamiswa chaizvo nemaitiro ako akafumuka.+ 28 “‘Wakaitawo upfambi nevanakomana veAsiriya+ nekuti wakanga usina kugutswa, asi kunyange pawakaita upfambi navo, haunazve kugutswa. 29 Saka wakawedzera upfambi hwako nenyika yevanotengesa* uye nevaKadheya,+ asi kunyange ipapo hauna kugutswa. 30 Chokwadi mwoyo wako wairwara,’* ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha, ‘pawakaita zvinhu zvese izvi, uchiita sepfambi isina kana nyadzi!+ 31 Asi pawakaunganidza mirwi yako yevhu panzvimbo dzine mukurumbira chaizvo mumigwagwa yese, ukazvigadzirira nzvimbo dzakakwirira mumisika yese, hauna kuita sepfambi nekuti wakaramba kubhadharwa. 32 Uri mhombwe yemukadzi inotora vanhu vaisingazivi ichisiya murume wayo!+ 33 Vanhu vanopa pfambi chipo,+ asi iwe ndiwe wakatopa zvipo kune vese vaikuvhima kuti vaite chipfambi newe,+ uye unovabhadhara kuti vauye kuzoita upfambi newe vachibva kwese kwese.+ 34 Wakasiyana nevamwe vakadzi vanoita chipfambi. Hapana anoita upfambi hunenge hwako! Ndiwe unobhadhara vamwe, asi ivo havakubhadhari. Unoita zvakasiyana nevamwe.’ 35 “Saka inzwa shoko raJehovha iwe pfambi.+ 36 Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Nekuti wakaratidza ruchiva rwako rwese, uye vanhu vakakuona usina kupfeka pawaiita upfambi hwako nevadiwa vako nezvidhori zvako zvese zvinosemesa,+ zvinonyangadza,* izvo zvawakatopa ropa revanakomana vako,+ 37 ndichaunganidza vaya vese vanokuda, vawakafadza, vaya vese vawaida pamwe chete nevaya vawaivenga. Ndichavaunganidza kuti vakurwise vachibva kwese kwese, ndoita kuti vakuone usina kupfeka, vokuona wakashama.+ 38 “‘Ndichakuranga nemitongo inofanira kupiwa mhombwekadzi nevakadzi+ vanodeura ropa,+ uye ropa rako richadeurwa nehasha uye negodo.+ 39 Ndichakuisa mumaoko avo, uye vachaputsa mirwi yako yevhu, uye nzvimbo dzako dzakakwirira dzichaparadzwa;+ uye vachakubvisa nguo dzako,+ votora zvishongo zvako zvakanaka,+ vokusiya usina kupfeka, wakashama. 40 Vachauya kwauri nevanhu vazhinji,+ uye vachakutema nematombo,+ vokuuraya nemapakatwa avo.+ 41 Vachapisa dzimba dzako nemoto+ vokuitira zvawakatongerwa, vakadzi vazhinji vachiona; uye ndichapedza upfambi hwako,+ uye ucharega zvekubhadhara vanhu. 42 Ndichakuratidza hasha dzangu dzese,+ uye kukutsamwira kwandakaita kuchapera;+ uye ndichasara ndagadzikana ndisisina kugumbuka.’ 43 “‘Nekuti hauna kuyeuka mazuva awaiva mudiki,+ uye wakanditsamwisa nezvinhu zvese izvi zvawakaita, ndichaita kuti utambure nezvawakaita,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha, ‘uye hauzoendereri nemaitiro ako akafumuka nemabasa ako ese anosemesa. 44 “‘Inzwa! Munhu wese anotaura zvirevo, achataura chirevo ichi nezvako: “Mwanasikana naamai zvakangofanana!”+ 45 Wakangoita saamai vako, avo vakazvidza murume wavo uye vana vavo. Wakangoitawo sevamwe vana vaamai vako, avo vakazvidza varume vavo uye vana vavo. Amai venyu vaiva muHiti, uye baba venyu vaiva muAmori.’”+ 46 “‘Mukoma wako iSamariya,+ uyo anogara kuchamhembe kwako* nevanasikana vake,*+ uye munin’ina wako uyo anogara kumaodzanyemba kwako,* iSodhomu+ nevanasikana vake.+ 47 Hauna kungogumira pakufamba munzira dzavo chete kana pakutevera mabasa avo anosemesa, asi pasina kana nguva, zvawaiita zvakatowedzera kuipa, uchitopfuura zvavaiita.+ 48 Neupenyu hwangu,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha, ‘munin’ina wako Sodhomu nevanasikana vake havana kuita sezvawakaita iwe nevanasikana vako. 49 Inzwa! Iyi ndiyo mhosva yemunin’ina wako Sodhomu: Iye nevanasikana+ vake vaizvikudza+ uye vaiva nezvekudya zvakawanda,+ vakagarika, vasina kana chinovanetsa;+ asi havana kubatsira vanotambudzika uye varombo.+ 50 Vakaramba vachizvikudza+ uye vakaita zvinhu zvinosemesa pamberi pangu,+ saka ndakaona zvakakodzera kuti ndivabvise.+ 51 “‘Kunyange Samariya+ haina kutadza zvinosvika pahafu yezvivi zvako. Mabasa ako anosemesa akaramba achiwanda kupfuura avo, zvekuti vanasikana vaamai vako vakapedzisira vava kuita sevakarurama nekuda kwemabasa ako ese anosemesa.+ 52 Iye zvino uchanyara nekuti wakapembedza* zvaiitwa nemukoma nemunin’ina wako. Nemhaka yechivi chako chekuita zvinosemesa kuvapfuura, ivo vakarurama kukupfuura. Saka nyara ushaye pekupinda nekuti wakaita kuti mukoma wako nemunin’ina wako vaite sevakarurama.’ 53 “‘Uye ndichaunganidza nhapwa dzavo, idzo nhapwa dzeSodhomu nevanasikana vayo, nenhapwa dzeSamariya nevanasikana vayo; ndichaunganidzawo nhapwa dzako pamwe chete navo+ 54 kuti unyare; uye uchanyara nemhaka yekuvanyaradza kwawakaita. 55 Vana vaamai vako, Sodhomu nevanasikana vayo, vachaita sezvavaiva pakutanga, uye Samariya nevanasikana vayo vachaita sezvavaiva pakutanga, uye iwe nevanasikana vako muchaita sezvamaiva pakutanga.+ 56 Waiona sekuti hazvikodzeri kuti utaure nezvemunin’ina wako Sodhomu pazuva rekuzvikudza kwako, 57 iwe wacho pawakanga usati wafumurwa kuipa kwako.+ Iye zvino vanasikana veSiriya nevavakidzani vayo vava kukuseka, uye vanasikana vevaFiristiya,+ avo vari kumativi ako ese, vari kukuzvidza. 58 Uchatambura nemaitiro ako akafumuka nemabasa ako anosemesa,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha.” 59 “Nekuti zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Ndichakuitirawo zvawakaita,+ nekuti wakazvidza mhiko pawakaputsa sungano yangu.+ 60 Asi ndichayeuka sungano yandakaita newe pawaiva mudiki, uye ndichaita sungano newe inogara nekusingaperi.+ 61 Uchayeuka maitiro ako, uye uchanyara+ pauchagamuchira vakoma vako nevanin’ina vako, uye ndichakupa kuti vave vanasikana vako, asi kwete nekuda kwesungano yako.’ 62 “‘Uye ndichaita sungano yangu newe; uye uchaziva kuti ndini Jehovha. 63 Uchabva wayeuka uye uchanyara chaizvo zvekutadza kushama muromo wako nemhaka yenyadzi dzako,+ pandichakuregerera pasinei nezvese zvawakaita,’+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.”
^ Ona mashoko emuzasi ari pana Eks 25:5.
^ ChiHeb., “nenyika yeKenani.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Ndakakutsamwira chaizvo.”
^ ChiHeb., “kuruboshwe rwako.”
^ Zvichida pari kureva maguta madiki ainge akapoteredza.
^ ChiHeb., “kurudyi rwako.”
^ Kana kuti “wakatsigira.”